Oukitel WP15: famaritana, vidiny ary misy | Androidsis
Ignacio Sala | 22/08/2021 10:00 | Fitaovana Android, Oukitel
Tonga ny vanim-potoana 5G, saingy misy zavatra tsara kokoa noho ny manana 5G amin'ny findaintsika? Eny, manana fahaizana bateria lehibe. Oukitel dia hanolotra smartphone iray misy bateria tsy mampino, telefaona goavambe misy 5G sy bateria manana fahaiza-manao 15600 mAh: io no WP15.
Raha heverina fa ny 5G dia mila fanjifana herinaratra lehibe, ny telefaona dia nasiana bateria ampy tsy ho tafatohina.
Amin'ny fotoana fandefasana azy, a raffle ao amin'ny tranonkala ofisialy. Ny fanombohana dia manomboka amin'ny 23 ka hatramin'ny 27 aogositra ary mandritra izany fotoana izany ny vidiny dia $ 299,99. Ireo mpividy 100 voalohany dia hahazo smartwatch maimaim-poana mitentina 50 $. Raha manomboka amin'ny 101 ka hatramin'ny 600 ianao dia hahazo headset TWS maimaim-poana.
1 Bateria 15.600 mAh
2 8-core processeur ary 8GB RAM
3 Volavola henjana
4 Oukitel WP15 Famaritana
5 Fizarana sary
6 Efijery 6,52 santimetatra
7 Rafitra fandidiana
8 Vidiny sy misy
Bateria 15.600 mAh
Ny bateria Oukitel WP15 dia iray amin'ireo tanjany satria manome antsika fahaleovan-tena hatramin'ny 4 andro fampiasana mahazatra na 1.300 XNUMX ora fiomanana (54 andro) misaotra ny 15.600 mah. Noho ity fizakan-tena goavambe ity, ny Oukitel WP15 dia lasa smartphone 5G manana fahaizana bateria avo indrindra.
Miaraka amin'ny habetsaky ny batterie lehibe toy izany, nieritreritra ireo tovolahy ao Oukitel fa hevitra mety tsara ny mizara izany amin'ny finday finday na fitaovana hafa mandoa finday, ka izany no anolorana antsika fanohanana ny famerenana amin'ny laoniny.
Ity terminal ity dia manohana famandrihana haingana hatramin'ny 18W, izay ahafahantsika mameno ny batterie tanteraka ao anatin'ny 5 ora, ka mahatonga azy io ho fitaovana mety mivoaka any ivelany nefa tsy manahy ny mitondra charger miaraka aminay.
8-core processeur ary 8GB RAM
Ao anatin'ny Oukitel WP15 dia ahitantsika processeur 8-core novokarin'i MediaTek: Dimensity 500 5G, mpikirakira izay ahafahantsika mankafy lalao rehetra ary mampiditra ihany koa Fifandraisana 5G.
Misaotra ny chip 5G, hankafy ny fifandraisana finday izahay 10 heny haingana noho ny 4G ankehitriny, miaraka amin'ny fampidinana sy fampidinana ambony indrindra 2,3 Gbps ary 1,2 Gbps avy.
Ny Oukitel WP15 dia miaraka amin'i Fahatsiarovana RAM 8 GB, izay ahafahantsika manana fampiharana misokatra marobe kokoa ary koa, ireo lalao izay mitaky herinaratra bebe kokoa, dia mihetsika amin'ny fahamendrehana tanteraka.
Ny tahiry anatiny atolotry ny Oukitel WP15 dia 128 GB, habaka ahafahantsika manitatra hatramin'ny 256 GB fitehirizana mampiasa karatra micro-SD.
Ity terminal ity dia Dual SIM, izay mamela antsika hampiasa SIM roa miaraka, fa very ny mety hanitarana ny toerana fitahirizana. Izany hoe, na mampiasa SIM roa amin'ny telefaona isika ary hipetraka amin'ny 128 GB fitahirizana na mampiasa SIM ary hanitatra ny habaka hatramin'ny 256 GB miaraka amin'ny karatra micro-SD.
Raha te hampiasa Google Pay ianao handoavana vola isan'andro dia azonao atao izany tsy mila olana amin'ny Oukitel WP15, satria manana NFC puce.
Ho fanampin'izany, dia mampiditra mpamerina Wi-Fi, fiasa iray ahafahantsika manitatra ny fambara Wi-Fi eo amin'ny tontolontsika ka hahatratra fitaovana marobe, fiasa izay tsy maharary na dia eo aza ny tanana, eny amin'ny toerana izay aharihary amin'ny tsy fisiany ny fandrakofana Wi-Fi.
Manolotra antsika ny Oukitel WP15 a famolavolana firafitry ny kibon'ny karbaona, famolavolana izay manampy fiarovana fanampiny amin'ny fianjerana tsy nahy.
Ho fanampin'izany, manolotra cIP68, IP69K ary MIL-STD-810G voamarina, fanamarinana ara-tafika izay tsy hitantsika afa-tsy amin'ny mobiles natao hiarovana ilay fitaovana alohan'ny hikapohana na hianjera.
Noho io fanamarinana io dia afaka atsobohy ao anaty rano hatramin'ny 1,5 metatra mandritra ny 30 minitra ilay fitaovana, noho izany dia tsara ny mitondra azy any amoron-dranomasina, ny pisinina ary mankafy ny fakantsarinao amin'ny toe-javatra misy antsika.
Oukitel WP15 Famaritana
efijery: 6.52-inch 720 × 1600 teboka HD
processeur: 700-core MediaTek Dimensity 8 miaraka amin'ny fanohanan'ny tambajotra 5G
Tabilao: ARM G57
Fahatsiarovana RAM: 8GB
Sehatra fitahirizana: 128GB mivelatra amin'ny 256GB miaraka amin'ny karatra TF
Fakan-tsary aoriana: 48MP (Sony) + 2MP + 0.3MP
Fakan-tsary eo aloha: 8 MP
seranan-tsambo: USB-C 9v2a 18W mifanaraka amin'ny famahanana haingana.
Groove: Dual-SIM na SIM + Micro SD
Fanamarinana: IP68, IP69K ary MIL-STD-810G
Mampiditra NFC puce handoa vola
Fananana loko: mainty
Ireo lehilahy avy any Oukitel dia tsy miraharaha ny fizarana sary ary ny WP15 dia ahitana andiana fakantsary mitambatra amin'ny lantia 3. Ny masinina lehibe dia novokarin'i Sony (toy ny ankamaroan'ny finday avo lenta eny an-tsena) ary mahatratra a Fanapahan-kevitra 48 MP.
Manaraka ny sensor 48 MP lehibe, hitantsika ny 2 MP sensor izay ahafahantsika maka sary amin'ny antsipirihany sy fakan-tsary virtoaly 0,3 MP natao alao ny mombamomba ny sary.
Ny jiro dia manaitra indrindra amin'ity terminal ity, tselatra miendrika V natao hanomezana fanazavana bebe kokoa na amin'ny sary na amin'ny horonantsary ary rehefa mampiasa ny finday avo lenta ho jiro ivelany na ao an-trano isika.
Eo aloha dia mahita fakan-tsary 8 MP, fakantsary azontsika ampiasaina mamoha ny terminal mampiasa ny endrikay ary io koa dia mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hanafoanana ny tsy fahalavorariana kely amin'ny tarehy.
Efijery 6,52 santimetatra
Ny efijery natolotry ny Oukitel WP15 dia mahatratra ny 6,52 santimetatra, manome antsika vahaolana HD + izy ary manana tahan'ny 18: 9, mety amin'ny fijerena sarimihetsika na andian-dahatsoratra nefa tsy mijaly amin'ny tarika mainty faly aseho amin'ny terminal miaraka amin'ny tahan'ny lafiny ambony.
Ny fahamendrehan'ny efijery dia voaro amin'ny rangotra tsy nahy sy ny fikosehana misaotra ny Teknolojia Corning Gorilla. Na izany aza, tsy maharary mihitsy ny mampiasa protector écran.
Ao anatin'ny Oukitel WP15 no ahitantsika ny tenantsika Android 11 Stock, izay hahafahantsika mankafy ireo fiasa rehetra nampidirin'i Google tao amin'ity kinova ity tsy misy sosona fanaingoana, izay ahazoana isa be dia be raha oharina amin'ny terminal hafa raha tsy tianao ny manimba ny traikefan'ny mpampiasa anao ny sosona fanaingoana ny ankamaroan'ny mpanamboatra.
Ity smartphone vaovao avy amin'ny mpanamboatra Oukitel ity dia misy vidiny $ 299,99 ary azo vidiana manomboka ny 23 aogositra. Mba hankalazana ny fandefasana tsena ny Oukitel WP15, ilay mpanamboatra dia hanome smartwatch mitentina 50 $ ho an'ireo olona 100 voalohany nametraka ny baiko.
Raha tara ianao, saingy ao anaty kaomandy 600 voalohany, dia hahazo fanomezana koa, indrindra ny sasany headphone tsy misy tariby. Raha tsy te hiala amin'ity fotoana ity ianao ary manararaotra ilay tolotra fampidirana dia tsy maintsy atao izany amin'ny alàlan'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Oukitel WP15: famaritana, vidiny ary misy